ikhaya/Iingcebiso zeWhatsApp amaqhinga/I-WhatsApp: Thumela kwaye ufumane iifoto ngokona mgangatho uphezulu ukusukela ngoku
Vangelis30. Agasti 2021
Kuyaziwa ukuba WhatsApp iifoto ziyacinezelwa xa zithunyelwa ukuze zikwazi ukuthunyelwa ngokukhawuleza. Ngelishwa, umgangatho uyahlupheka kwaye imifanekiso ayifiki kumgangatho wayo wokuqala. Ngoku i-WhatsApp yakhele kulo msebenzi ukumisela umgangatho wemifanekiso ethunyelwe ngokwakho. Ukubonisa njani ukuba ungayenza njani.
Thumela imifanekiso kumgangatho ophezulu
1 Thumela imifanekiso kumgangatho ophezulu
2 Ke ungathumela iifoto ngokona mgangatho ubalaseleyo
3 Thumela imifanekiso esemgangathweni esemgangathweni nge-smartphone ye-Android
Die uthumele imifanekiso yiza nezinto ezingalunganga kangako quality e. Oku kuyaqapheleka xa usifumana umfanekiso zoma phakathi. Imfiliba okanye ipikseli.
WhatsApp wakhe umsebenzi, kwimithombo yeendaba Layisha umgangatho ukuzimisela ngokwakho. Unokuhlengahlengisa umgangatho kuseto uthumele iifayile khetha.
Ke ungathumela iifoto ngokona mgangatho ubalaseleyo
Qala u-WhatsApp kwaye ucofe useto kwikona esezantsi ekunene
Kwiwindow elandelayo ucofe iqhosha Ukugcinwa kunye nedatha.
Skrolela ezantsi kwaye ucofe "Umgangatho wokulayisha kweMidiya"
Utshintsho lugcinwa kwangoko. Ukuba uthumela ifoto ngoku, iya kuthunyelwa kumgangatho oyifunayo.
Nceda uqaphele oku ukuba ufuna okona kulungileyo Khetha umgangathoIyabonakala ekusebenziseni idatha yedatha. Njengomthetho, ngcono umgangatho wefoto oyithumelayo, kokukhona kusetyenziswa i-MB.
Thumela imifanekiso esemgangathweni esemgangathweni nge-smartphone ye-Android
Ukuba usebenzisa i-WhatsApp ene-smartphone ye-Android, ingxelo yangoku ngoku ikwenza ukwazi ukubona umgangatho wemifanekiso oyithumele ngokwakho. Ukwenza useto, yenza oku kulandelayo:
Qala kuWhatsApp. Ngaphezulu, thepha i amanqaku amathathu kwaye uqhubeke izilungiselelo
Thepha kwi "Ukugcinwa kunye nedatha"
Uya kuwufumana umsebenzi emazantsi ezantsi "Umgangatho wokulayisha kwimidiya". Umgangatho wokulayisha ifoto usetelwe ngokuzenzekelayo. Ukuba ucofa kuyo, uya kufumana ifestile apho unokumisela khona umgangatho.
Iifoto ezisemgangathweni ezisemgangathweni zikhulu, kungathatha ixesha elide ukuzithumela.
Bonisa kwaye ucime yonke imifanekiso yemidiya, iividiyo, amakhonkco engxoxo ye-WhatsApp
Guqula inombolo yefowuni kuWhatsApp- Iphone - Android - Ifowuni yeWindows
I-iPhone: Yongeza umnxeba omtsha kuWhatsApp
Ifowuni ye-WhatsApp yevidiyo
I-WhatsApp gcina ivolumu yedatha xa usenza iifowuni kwi-Android
WhatsApp: Cwangcisa umyalezo wakho wesandi kwi-iPhone
Yenza iminxeba yevidiyo kwilizwi kwiqela leWhatsApp
Yenza kusebenze umsebenzi woxinzelelo kuWhatsApp
Imiyalezo ye-Star WhatsApp kwi-iPhone Android
Cima imiyalezo ye-WhatsApp kwi-iPhone kunye ne-Android-nantsi indlela
thumela imifanekiso engacinezelwanga kuWhatsapp thumela iifoto kumgangatho wokuqala we-iphone Imifanekiso esemgangathweni whatsapp whatsapp thumela imifanekiso njengamaxwebhu iphone whatsapp thumela imifanekiso engacinezelwanga iphone whatsapp imifanekiso ukuthumela thumela whatsapp ubungakanani bomfanekiso Iifoto zikaWhatsApp
19. Agasti 2021
WhatsApp: Mamela imiyalezo yezwi ngesantya esiphindwe kabini